Sebenzisa Abanye Ubuhlakani Futhi Ugweme i-Captcha | Martech Zone
Sebenzisa ubuhlakani obuthile futhi uvikele i-Captcha
NgoMgqibelo, July 14, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Mhlawumbe okunye kokuhlangenwe nakho okubi kakhulu komsebenzisi engiqhubeka nokungena kukho kuwebhu Captcha Ubuchwepheshe.
I-Captcha yilapho isithombe senziwa ngezinombolo, izinhlamvu, futhi kwesinye isikhathi amagama tha udinga ukuphinda uthayiphe kwenye inkambu. Lokhu kwenzelwa ukuvimbela okuthunyelwe okuzenzakalelayo kwamafomu kusuka kogaxekile bokubeka amazwana. Njengoba bengakwazi ukuthola ikhodi, abakwazi ukuhambisa okuthunyelwe mbumbulu.
Ubuchwepheshe obuphazamisayo. Angikwazi ukukutshela ukuthi ngiya kangaki ukuhambisa ukuphawula noma ukuthumela umlayezo kwesinye isayithi futhi ngiphazanyiswa yinkambu yeCaptcha. Imisa ukugeleza futhi imise umuzwa womsebenzisi. Angikwazi ukuma. Kwesinye isikhathi, ngiyayeka futhi ngiyeke ukuvakashela isayithi noma ukusebenzisa ithuluzi.
Ikhiqizwe yikhompyutha. Iqiniso lokuthi likhiqizwe yikhompyutha liyangitshela ukuthi ngelinye ilanga liyophulwa yikhompyutha. Kuyindaba yesikhathi kuphela.
Akuve ovilaphayo. Esikhundleni sokulungisa inkinga, kwenza umsebenzisi ukuthi asebenze azungeze yona.
Abantu abambalwa bangibuze ukuthi kungani ngingalisebenzisanga iCaptcha ngenkathi ngibhala i-plugin yeFomu lamazwana. Angizange ngiyisebenzise ngoba ngifuna ukwenza isipiliyoni kangcono, hhayi okubi kakhulu, ngenkathi kugwenywa abagaxekile bokubeka amazwana. Ngobuhlakani obuncane nje, izinkampani zesoftware zingenza lezi zinselelo zijabulise, hhayi ukuphazamiseka.
Umbuzo wami oyinselele ku- ikhasi lokuxhumana ilula kakhulu, "igama lokugcina esihlokweni sebhulogi lami". Kodwa kwenza umuntu abheke umzuzwana futhi mhlawumbe aze ahleke, ukuthi kufanele angene "kubhulogi". Kuhle futhi kulula. Azikho izinhlanganisela zezinombolo nezinombolo ezilahliwe, ezihlukanisiwe, nezinama-wacky. Umbuzo olula ongaphendulwa yikhompyutha - umfundi kuphela.
I-Facebook manje isebenzisa iCaptcha
Inkampani yakamuva eyisisulu sobuchwepheshe besitayela seCaptcha ngu Facebook. Akukona nje kuphela ukubona ngokuphelele, ungafunda ngokulambisa into eyindilinga. I-Facebook ibiyinkanyezi enhle ekwakhiweni kwamathuluzi amahle nokuhlanganiswa kusayithi labo… ngabe bekufanele basebenzise lobu buchwepheshe obuyisiphukuphuku? Kubi ngokwanele ukuthi i-typepad nabanye bathengiswa kuyo.
Abanye bangaphikisa ukuthi "kuyasebenza". Kusebenza kuphela ngenhlonipho yokuthi isusa inkinga kuwebhusayithi bese iyibeka kumsebenzisi. Lo mklamo ongenazaba futhi kunezindlela ezingcono! C'mon Facebook… thatha ithuba, qamba okuthile! Yiba nobuciko.
I-Blog-Tipping: Itch Yezobuchwepheshe
Jul 14, 2007 ngo-9: 10 PM
Isixazululo esisodwa esisha esifana ne-captcha's yi-HumanAuth (neKittenAuth). Kuyafana futhi nomqondo wakho "wokugcina esihlokweni sebhulogi lami". Umuntu kufanele afunde umkhondo futhi aveze ukuthi uyawaqonda ama-semantics alo mkhondo. Ayikho ikhompyutha engakwenza lokho, okwamanje. Kepha uma ulalela abantu be-AI, bazoshesha, maduzane! Kuseduze kwekona, impela!
Uma i-HumanAuth noma okuthile “okujwayelekile” okungakwazi ukwenziwa ngamakhompyutha kungabamba futhi kusetshenziswe kabanzi, kunganciphisa ukuphazamiseka okhuluma ngakho.
KODWA, kusamele uqaphele ekusebenzeni. Isampula likaHumanAuth engivele ngaya kulibuka futhi linephutha! Okwamanje lapho uchofoza izithombe ezi-3 ezifanele, iguqula inkinobho ukukwazisa ukuthi uyitholile kahle. Kulungile, kepha kukunikeza ukuchofoza okungenamkhawulo, ngakho-ke i-algorithm elula ephindaphindayo ingathola kalula izithombe ezi-3.
Umbono wakho ulula futhi ulula ngokuvamile kusho ukuthi kuncane okungahambanga kahle.
Jul 15, 2007 ku-6: 57 AM
Bengingazi ngeHumanAuth neKittenAuth… ngizobheka lobu buchwepheshe!
Sep 4, 2007 ngo-9: 33 PM
Akukutsheli ukuthi unayo "kulungile" kumane kukutshele ukuthi unezithombe ezintathu ezikhethiwe.
Jul 15, 2007 ku-5: 40 AM
Umbono onentshisekelo, noma kunjalo anginasiqiniseko sangempela sokuthi kufanele into yayo yebhulogi…
Kepha yini umuntu angayenzeli ukunakwa nje okuncane… 😉
Noma kunjalo, indawo yethu (http://ajaxwidgets.com) ayinayo i-captcha yohlelo lwethu lwebhulogi. Futhi iqiniso ngukuthi ama-99.99% awo wonke amabhulogi ogaxekile enqatshwa iqiniso elilula lokuthi asiyivumeli i-HTML…!
Ngaphezu kwalokho sisebenzisa “amakhondomu okuxhumanisa” enkambu ye-URL nayo esusa ogaxekile abaningi. Akunjalo konke lokho kunzima 🙂
Jul 15, 2007 ku-6: 50 AM
Inhloso yami bekungekhona ukunakwa, Thomas. Ngempela ukuletha ukunakekela kubuchwepheshe obwamukeleka kakhulu kodwa obungasebenziseki.
Isibonelo sakho sendlela osebenzelana ngayo nephuzu lami, impela zikhona izindlela ezingezansi zokuxazulula le nkinga.
Ngiyabonga, Thomas! Futhi ngiyawathanda amawijethi, ngakho-ke ngizobe ngibheka isayithi lakho!
Jul 15, 2007 ku-6: 45 AM
Uyehluleka ukusho ama-captcha's okungewona akhathele futhi ayiqiniso asuselwe kumfanekiso wesithombe.
I-captcha ingaba yizinto eziningi, okususelwa embhalweni, embuzweni nasekuphenduleni, kokuzithoba (khetha umdlwane osikiwe kakhulu) futhi lezi zishesha kakhulu ukuzisebenzisa futhi kunengqondo kakhulu ukuzama ukuthola ukuthi ngabe lokho kuyi-o noma u-0.
Ngivumelana nawe, futhi ngiyabazonda nabo, kepha okuthunyelwe kwakho akuzange kuhlanganise nobubanzi obugcwele besihloko, futhi akuzange kunikeze imibono mayelana nokuthi ungayilungisa kanjani.
Jul 15, 2007 ku-6: 54 AM
Ngiyavuma - angizanga nesisombululo esihle kunazo zonke… yilokho engikubiza ngakho ezinkampanini ezinezinsizakusebenza ezinhle kanye nochwepheshe besipiliyoni sabasebenzisi. Isisusa sami sokubhala lo myalezo ngemuva kokubona i-Facebook isebenzisa lobu buchwepheshe.
Angibonanga nokuthi ubuchwepheshe beCaptcha budlulela ngaphandle komfanekiso wefonti olula okufanele umsebenzisi awuthumele. Uma ubuchwepheshe beCaptcha bandisa unyawo lwabo lube yimibuzo nezingqinamba eziyinselele ezingenziwa ukuthuthukisa, hhayi ukwehlisa isithunzi, ulwazi lomsebenzisi, ngilungele bona!
Jul 15, 2007 ku-7: 25 AM
Sebenzisa amagama aguquguqukayo. Lapho umsebenzisi efika ekhasini setha ikhukhi leseshini eliqukethe inombolo engahleliwe. Bese unikeza ithegi yakho "yokufaka" igama = "phawula __ [isihloko]", bese unikeza enye yezinsimu zakho.
Bese usetha kabusha inombolo njalo lapho othile evakashela leli khasi.
Lokho kuzoqinisekisa ukuthi ngumuntu oya ekhasini: isikhashana.
Jul 15, 2007 ku-7: 48 AM
Ngivumelana ngokuphelele nawe. Ama-CAPTCHA abuhlungu ku…
Kodwa-ke, kulula impela ukubhala i-CAPTCHA engabonakali eyenza ubuqili. Kunezindlela eziningi ezahlukene zokwenza.
Jul 15, 2007 ku-8: 57 AM
EzikaCaptcha zingacasula. Abanye ngaphezu kwabanye. Ngibonile okunye okungenzeki ukuthi kufundwe (okwehlula injongo). Ngisebenzisa uhlobo “olubi” lweCaptcha oluchaze kumaphrojekthi ambalwa. Kodwa-ke, ngenza kube lula ngokwanele ukuthi kufundwe ukuze umuntu angadingi ukuphikisa ubuchopho bakhe ukuze buzwisise. Futhi, ngi "captcha" kuphela lapho umsebenzisi ebhalisa, hhayi ngaso sonke isikhathi lapho befaka okufakwayo kusayithi. Akuyona uhlelo oluphelele, kepha ngiyithatha njengengaphansi kokucasula komuntu.
Lapho uya khona, singaqala ukukala ama-Captcha's ku- “HAF” yabo (i-Human Annoyance Factor), i-Spammer Annoyance Factor, njll.
Jul 15, 2007 ku-9: 13 AM
I-Captcha vs. HAF. Ngiyakuthanda lokho!
Jul 15, 2007 ngo-12: 19 PM
Angifuni ukululaza i-plugin yakho kepha sekuvele kunendlela engcono yokuhlunga ogaxekile ku-wordpress. Kukhona i-plugin emangalisayo engiyisebenzisayo ebizwa nge-SpamKarma futhi isebenzisa zonke izinhlobo ze-heuristics ukuthola ukuthi lokhu okuthunyelwe kungumuntu noma kungogaxekile. Kade ngiyisebenzisa cishe iminyaka engu-1/1 noma engu-2 manje futhi uma ihlaba umxhwele ukuphawula kothile njengogaxekile futhi kanye lapho bekungenasiqiniseko ngakho-ke icele lowo muntu ukuthi agcwalise i-captcha abese evumela ukuphawula kudlule. Ibamba amakhulu wamazwana ogaxekile ngesonto noma kunjalo futhi ayivumeli noma ngubani ukuthi adlule.
Ngiyazizonda nama-captcha. Ukube bekufanele ngibhale i-captcha bengizoyithanda http://www.hotcaptcha.com/ ngoba ukukhetha abantu abahle noma izilwane ezinoboya noma lokho okuvela ochungechungeni lwezithombe akulutho kubantu futhi kunzima kakhulu ngemibhalo ezenzakalelayo.
Jul 15, 2007 ngo-12: 28 PM
Angiyisebenzisi iSpamKarma kepha ngiyizwile ngayo. Ngisebenzisa Ukuziphatha Okubi futhi kungenzeka ukuthi ngibhekene kuphela no-10% wamazwana ogaxekile ebenginayo ngaphambili.
Ngizohlola i-Hot Captcha - izwakala ifana nalokho engingathanda ukukubona.
Jul 15, 2007 ngo-12: 23 PM
Lokhu okuthunyelwe akusizi ngalutho. Isixazululo sakho asilinganisi. I- "bot" ingahle ihlelwe kalula ukudlula isilinganiso sakho sokuphepha ngokugcwalisa "ibhulogi" njalo. Isixazululo sinemibuzo ephelele - imibuzo eminingi njengoba uthanda ukuyibhala. Ngabe i-facebook, umphathi wamathikithi, noma i-yahoo ingasisebenzisa kanjani isixazululo esinje?
Lokhu okuthunyelwe bekuhlekisa nje ngokwanele ukuthola ukunakwa nokukhuphula imali yakho yezikhangiso. Kuzofanele uzame kanzima ukuze “uthiphu” le bhulogi. Ngingaqala ngokuqukethwe okufanele ukukufunda.
Jul 15, 2007 ngo-12: 34 PM
Hawu, Mat. Othile uzwakala enomsindo omncane namuhla.
Kuzwakala sengathi awukufundanga ngempela okuthunyelwe yimi. Angikaze ngithi isixazululo sami sizokala futhi akufanele sisetshenziswe yilezi zinkampani. Mina wenza ngithi ngifisa ukubona ezinye izinkampani (ezinjenge-Facebook) ziza nesisombululo esihlakaniphe kakhudlwana. I-plugin yami iyakuvumela ukuthi ushintshe umbuzo oyinselele futhi uphendule noma kunini lapho ungathanda - ayikho i-bot ezohambisana nalokho. Kuze kube manje, angizange ngibe ne-SPAM ekhasini lami lokuxhumana kusuka kulesi sixazululo.
Isibonelo esisodwa: Mhlawumbe i-Facebook ingazuza ngokusebenzisa isikhangiso esisekhasini bese ibuza ukuthi "Ngubani umkhangiso okuleli khasi?". Noma yini ingcono kunokushaya isibhakela sezinombolo nezinhlamvu - uma ungazifunda empeleni.
Halala! Qiniseka ukuthi ubhalisile! hehe
Jul 16, 2007 ku-9: 12 AM
Isikhangiso esithi “Ubani okuleli khasi” kungumqondo onentshisekelo. Ngikubonile kusebenza ngaphambilini kuwebhusayithi ebizwa ngeMoola.com. Kodwa-ke, bayisebenzisa ngqo njengendlela yokuqondisa ukunakekela kubakhangisi babo (njenge-interstitial) kunendlela yokuvimbela ogaxekile.
Abanye babo baze bakuphoqe ukuthi ubuke i-video yesikhangiso yesekhondi engu-20 bese uphendula umbuzo onjengokuthi “Bekuyiphi inkampani le sikhangiso?” Ngenkathi ngingeyena umlandeli waleyo ndlela ethile (ngiyakuzonda ukulinda), kungathakazelisa ukubona ukuthi yini efana naleyo eyenzayo ekukhangiseni imali.
Jul 15, 2007 ngo-4: 30 PM
Ngaphandle kwesici sokucasula, esikhulu, ama-CAPTCHA ahlala engafinyeleleki kunoma ngubani onombono ongaphansi ophelele.
Cabanga nge-CAPTCHA othola ukuthi kunzima ukuyifunda bese uvumela umuntu ongaboni kahle. Kunzima? Cishe akunakwenzeka.
Kuthiwani ngomuntu ongenawo umbono nhlobo, evula iwebhu ngesifundi sesikrini noma ubuchwepheshe be-braille. I-CAPTCHA yakhelwe ngendlela yokuthi izinhlelo azikwazi ukuyifunda. Kulokhu, nomsebenzisi okhubazekile ngeke.
Kunama-CAPTCHA ambalwa atholakalayo, afaka i-CAPTCHA yezwi kulabo abangaboni kuyisibonelo, kepha ukukhathazeka kokusebenziseka okungeziwe kukwenza kube ubuchwepheshe engingasoze ngacabanga ukubusebenzisa. Shaya ogaxekile ngenye indlela, ungenzi abasebenzisi bakho bangempela bakhokhe (futhi nesizathu sokusebenzisa i-plugin dofollow).
Jul 15, 2007 ngo-8: 43 PM
Ama-Captchas awalungile. Ama-captchas amabi awalungile. Uma kunzima ukuthola ukuthi awukwazi ukukufunda, lokho kubi.
Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ikhambi elingcono ngumbuzo oyisisekelo wezibalo, okuguqukayo okuthathu:
1. Inombolo 1 (0-9)
2. Inombolo 2 (0-9)
Kwenziwe ngakho-ke izibalo zilula kakhulu, futhi ungathola ukuthi impendulo ivela kumbono weskripthi kalula kangakanani.
Jul 16, 2007 ku-9: 13 AM
Isixazululo esisodwa esihle engihlangabezane naso kwenye indawo kwakuyibhokisi lokuhlola elibhalwe ukuthi “Ngingumgaxekile”, elafika lingamakiwe ngokuzenzakalela. Kuyavunywa, kusebenza kakhulu kumongo wokuvimbela ukungena ngemvume okuzenzakalelayo kunamazwana (njengoba imibono yebhulogi imvamisa ingenawo amabhokisi wokuhlola adinga ukubhekwa).
Vele ekugcineni kumane nje kuyindaba yesikhathi ngaphambi kokuthi ama-AI akuphule lokho. Kepha angicabangi ukuthi kunesixazululo esifanelekile kunamarobhothi angasoze aphuka, ngakho-ke lokhu kuhle ngokwanele futhi akuphazamisi isipiliyoni somsebenzisi nhlobo (ngaphandle kokuthi uzibheka njengogaxekile…)
Jul 16, 2007 ku-9: 18 AM
Kuthiwani ngamazwana amabi ngalokhu okuthunyelwe "ukunakwa"? Kusukela nini kwaba yinto embi ukufaka izwi lakho engxoxweni. Heck, ngamazwana ayi-17 asevele ekhona, kusobala ukuthi yisihloko abantu abasithandayo.
Ngaphandle kwalokho, uma lesi yisihloko esidonsa ukunaka kwabantu, kungani ungafuni _ukufuna ukubhuloga ngakho?
Jul 17, 2007 ku-11: 34 AM
Kanjani lokho akuyona iCAPTCHA?
Kuyiqiniso, akuzona izinhlamvu ezijwayelekile ezinama-mangled ezithombeni ezenziwe ngobuciko, kepha kuyinto ethile ezama ukwehlukanisa ikhompyutha nabantu.
May 20, 2008 ku-10: 55 AM
Yebo, ngiyavuma ukuthi ama-captcha ayacasula kancane, futhi ngiyaxolisa ukwazi ukuthi ayisithiyo kubasebenzisi abakhubazekile, kepha muva nje
kugashulwe mayelana nokuthi ngithokozela kangakanani imvelo embaxambili yohlelo lwe-reCaptcha, ngoba ivimba ogaxekile (yize kungenjalo ngo-100% ngempumelelo, njengoba usho) ngenkathi ngisiza ekuchazeni izincwadi, futhi ngisengumlandeli.
Akunakuphikisana nomthelela wabo omubi kokuhlangenwe nakho komsebenzisi, kepha kufanele uvume ukuthi ukusebenzisa umzamo omncane kwilungu ngalinye lechibi elikhulu labantu ukwenza lokho ngisho nekhompiyutha ebukhali kakhulu engakwazi (funda umbhalo onamahloni ophikisana ne-Optical Character Recognition) kuyinto enhle kakhulu Isixazululo.
Yize ngikhuluma ngokujwayelekile, yebo, ngisebenzisa ubuqambi esikhundleni sekhodi lapho kunokwenzeka.
Feb 15, 2009 ngo-6: 59 PM
Okuthunyelwe okuhle okufingqiwe. Nami, angivumelani namalangabi maqondana nenhloso yokuthunyelwe kwakho. Ikakhulukazi lapho abanye bekhombisa ukungabi khona kwakho kokunikeza "impendulo" noma "enye indlela," engingafunga ukuthi uyenzile nge-plugin-form plugin yakho nengxoxo yekhasi lakho lokuxhumana (noma kukhona engikuphuthele khona? 😉 Ngicabanga ukuthi abantu abaningi kakhulu yenza imibono (bese wabelana ngayo) ngaphandle kokuzihlupha ngokufunda okuthunyelwe okufishane, okufana nalokhu, ngaphambi kokuba kuphume (okufeza okuncane)
Le mpikiswano ethokozisayo futhi, noma ngabe isixazululo siyenziwa, kufanelekile ukubhala ukuthi ufuna. Yibhulogi yakho, ngemuva kwakho konke futhi - yilokhu okungikhathaza kakhulu ngamanye amazwana - kusukela lapho ukubhuloga kube yisibopho somphakathi? Uma ufuna ukubhala ngento ethile, bhala ngayo. Noma ngubani ongafuni ukufunda usenakho ukukhetha ukungakufundi. Ukube ubukhokhisa imali, lokhu bekungaba indaba ehlukile, kepha, uma ngiqinisile, ama-weblog aqhamuka esifisweni sobuningi sokuthumela cishe noma yini futhi / noma yonke into engena ekhanda labo bese ikubeka ukuze iboniswe ngumphakathi, noma ukwenza kube lula ukuhlanganyela nabangani. Okuqukethwe kwamabhulogi amaningi akutholakali esidlangalaleni noma akujabulisi nakulabo abangabandakanyeki ngqo.
Bekufanele ngihleke lapho ngifunda ngokusebenzisa le posi ukukhulisa imali yakho yezikhangiso. Mhlawumbe (futhi ngithemba kanjalo) umuzwa wakho ubungcono kunowami, kepha - ngaphandle kokuthi ubhloga ukukhuthaza umkhiqizo - ungabhala nge-captcha noma ungabhala ngokuthi ukudla kwenja ejwayelekile kunuka kanjani kanye nohlelo lwakho lwesikhangiso ukhokhe ngesilinganiso salo esivamile esingalindelekile kunoma yisiphi isimo 😉
Uma kushiwo lokho, uma abenzi be-CAPTCHA befunda, ngiyabonga ngokungeza umsindo! Indawo emnyama emnyama enendawo eyisigaxa esimhlophe egridi engaphambili lapho kubhalwa khona amagama amhlophe (futhi ahlanekezelwe kakhulu) (kwesinye isikhathi onqenqemeni lwesithombe) yisibonelo esihle sesimo lapho umuntu onombono ohloniphekile ezoba nobunzima ekuchazeni, kepha Uhlelo luzoxazulula kalula ngokuhamba kwesikhathi.
Amasenti ami we-2 kuphela,